Compendium wuxuu soo daayaa Emailka si aad ugu dhejiso | Martech Zone
Compendium wuxuu siidaayaa Emailka si aad ugu dhejiso
Talaado, Maarso 22, 2011 Axad, Febraayo 9, 2014 Douglas Karr
Markii aan ka shaqeeyey Isku-darka (shirkad aan gacan ka gaystay bilaabista iyo saamiyada), ganacsiyada markasta waxay raadinayeen nuxur ay ku dhajiyaan. Ganacsi kastaa wuxuu leeyahay tan kakooban… mararka qaar meesha laga raadsado maahan wax iska cad, in kastoo. Hal meel oo gaar ah oo aan had iyo jeer kugula taliyo ayaa ah galka ay direen.
Shaqaalahaagu waxay ka jawaabayaan tan su'aalo ah oo ku saabsan rajada iyo macaamiisha si isku mid ah… maalinta oo dhan. Fursadaha ayaa ah in haddii hal rajo ama macmiil uu raadinayo jawaab su'aasha, waxaa laga yaabaa inay jiraan tobanaan, boqollaal ama xitaa kumanaan dad ah oo halkaas jooga oo raadinaya jawaab isku mid ah. Haddii aad waqti siineysid farsameynta farriinta adoo adeegsanaya emayl… maxaad ugu celin weyday jawaabta boostada?
Compendium wuxuu qaatay fikradda talaabo dheeraad ah, taas oo u oggolaanaysa dadka wax qora ee wax qora qor emayl ama mid soo dir si toos ah barnaamijkooda. Markaad halkaa gaarto, isticmaaluhu wuu geli karaa, xiri karaa, ama toos ugu gudbin karaa maamule si uu u daabaco. Chris iyo kooxdiisii ​​Compendium waxay qabteen shaqo aad u wanaagsan… iyagoo daacad u ah aragtida cusub ee Chris ee waxa Compendium sameyn doono… meel kasta iyo meel kasta.
Waxaan ku joogsan doonaa Compendium booqasho waqti dheer ah berri! Waxaan si dhuumaaleysi ah ku helayaa qaar ka mid ah fikradaha socda ee isbeddelada soo socda ee madasha. Way fiicantahay inaad aragto dabka calooshooda ku jira!
Helitaanka Fursadaha otomaatiga Suuqgeynta
3 Furayaal Qoraal wax ku ool ah